डाँगीबाट खोसेर लामिछानेलाई कार्यबहाक मेयरको जिम्मेवारी « Farakkon
डाँगीबाट खोसेर लामिछानेलाई कार्यबहाक मेयरको जिम्मेवारी
तुलसीपुर, वैशाख १९ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यबहाक मेयरको जिम्मेवारी शुक्रवार नवराज लामिछानेलाई प्रदान गरिएको छ । काठमाडौंमा रहेका मेयर घनश्याम पाण्डेले सूर्यबहादुर डाँगीलाई हटाएर वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष लामिछानेलाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । वडा नं. १२ का अध्यक्ष समेत रहेका डाँगी नगर प्रबक्ताको जिम्मेवारीपनि छन् ।
एकाएक कार्यबहाक खोस्नुपर्ने कारण सोध्दा उनले जाँडरक्सि खाएर मर्यादा विर्सेनेहरुका कुरा धेरै नगरौं है भन्ने जवाफ मात्रै दिए । भने ‘बढ्दा छट्टाउन थालेपछि त ठिक गर्नु प¥यो नि हैन र ?’विश्वसनिय स्रोतका अनुसार विहीवार बेलुका तुलसीपुर ४ मा कार्यबहाक मेयर डाँगी, वडा नं. ४ का अध्यक्ष बालकृष्ण राना र मेयरपाण्डेका स्वकीय सचिव धर्मबहादुर वलीले मदिरा सवेन पछि फेसबुक लाईभमा आएर कतिपय वडा अध्यक्ष, मेयर पाण्डे लगाएतको कार्यसैलीको टिप्पनी गरेका थिए ।
मेयर निकटका एक कर्मचारीले भने–‘त्यो कुरा मेयरले थाहाँ पाएपछि कार्यबहाक मेयरको जिम्मेवारी एकाएक खोसेर लामिछानेलाई दिनुभएको हो।’ त्यो कुरा मेयर पाण्डेलाई सोध्दा उनले पनि नकारेनन् । बरु भने–‘म काठमाडौंवाट आइतवार तिर फर्किन्छु अनि थप कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’